Maraykanka oo qaaday tallaabooyin lagu fududeeynayo howalaha samafalka iyo gaaritaanka dadka macaluulay. – Radio Daljir
Washington DC, August 06 – Dawladda Maraykanka ayaa meesha ka saartay cabsi ay hay’adaha gargaarku ka qabeen in ay howlo samafal ka fuliyaan goobaha ay ka taliso kooxda Alshabab. Tallaabadan ayaa loogu tala-galay si loo fududeeyo hab-sami-u-socodka howlaha gargaarka loo fidinayo dadka ay taabatay macaluusha ba’an isla markaana loo badbaadiyo noloshooda.
Shir dhinaca telefoonka ah oo shalay Khamiis taariikhduna ahayd 5-ta bisha August ay qabteen mas’uuliyiin sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa lagu sheegay in hay’adaha gargaarku ayan la kulmi doonin wax dacwo ah loona tiigsan doonin sharicga Maraykanka ee khuseeya cunaqabataynta.
Shirkaas, oo ay ka soo qaby-galeen warfdiyeen iyo diblumaasiyiin ku kala sugnaa Nairobi, Addis Ababa, Johansburg, Garowe iyo Muqdisho ayaa waxa siyaasadda cusub ee Maraykanka ka soo qayb-galayaasha u faahfaaiyay Bruce Wharton oo ah ku-xigeenka kal-kaaliyaha xog-hayaha arrimaha dibadda Maraykanka ee arrimaha Afrika, Dr. Reuben Brigety oo ah ku-xingeenka kaaliyaha xog-hayaha arrimaha dibadda Maraykanka ee arrimaha dadka, qaxootiga iyo socdaalka oo uu weheliyo Jon Brause oo ah ku-xigeenka kaaliyaha xog-hayaha arrimaha dibadda ee xafiiska dimuqraadiyadda, xasarada iyo gargaarka bini’aadanimo oo ah qayb ka tirsan Hay’adda USAID ee horumarinta Caalamka.
Furfurnaan iyo dabacsanaan lagu sahalayo gargaarka.
Bruce Warthon ayaa ugu horeeyn sheegay in haatan 12 milyan oo u badan Soomaali, Kenyaan iyo Itoobiyaan ay u baahan yihiin gargaar bini’aadanimo oo dag-dag ah, waxanuu intaa ku daray in dalkiisa Maraykana iyo waddamada kale ee ay ka wada-shaqeeyaan arrimaha gargaarka ay aad uga walwalsan yihiin xaaladda nafaqo-xumo ee sida daran u sii koraysa, gaar ahaan caruurnta ku sugan koonfurta Soomaaliya.
Mr. Warthon waxa uu taabtay dadaallada la wado ee gargaarka inkasta oo uu muujiyay niyad xumo ah in ayan arrimuhu si dag-dag ah caadigoodii ugu soo noqon karin.
Mr. Warthon waxa uu sheegay in Maraykanku uu hadda yahay kan ugu badan ee dhaqaalaha ku bixiya arrimaha gargaaka ee mandiqadda ka socda, waxana uu intaa ku daray in illaa iyo haatan ay ku baxsheen dhaqaale gaaraya 459 malyuun oo doollar kaasoo ku baxa, howlaha gargaarka bini’aadanimo, qaxootiga, dadka ku bara-kaca gudaha dalka iyo waliba dadka kale ee ay abaaruhu saameeyeen.
Mar uu mas’uulkani soo qaaday kaalinta ay colaaduhu ku leeyihiin abaaraha iyo sida ayan Koonfurta Soomaaliya in muddo ahi u gaarin wax gargaar ah, ayuu sheegay in dawladda Maraykanku kala shaqeeynayso beesha caalamka sidii mushkiladda Soomaaliya loogu heli lahaa xal caam ah, waxana uu si gaar ah u tilmaamay dadaalka ay beesha caalamku ugu jidho in laga mira-dhaliyo heshiiskii Jabuuti, sifo waddankaas Soomaaliya iyo muwaadiniintiisuba u helaan waddan xasilloon oo leh dawlad shaqaynaysa.
Mr. Warthon, ku-xigeenka kaaliyaha xog-hayaha arrimaha dibadda Maraykanka ee arrimaha Afrika, waxa uu yiri, sifo wax looga qabto xaallada ba’an ee ka jirta dhulka, dawladda Maraykanku waxa ay dhawaan soo saartay tilmaamo iyo tallaabooyin cusub si loo abuuro dabacsanaan sidii hore ka badan, si gargaar isugu jira noocyo badan loo gaarsiiyo dhul aad u ballaaran oo ay dhibaatadu saamaysay.
Tallaabooyinkan cusub ayuu ku sheegay in ay shakiga ka saarayaan hay’adaha gargaarka ee la shaqeeya Maraykanka, isla markaana ayan ka hor-imaanayn shuruucda iyo qawaaniinta dalka haddii ay ka qayb-qaataan howlaha gargaarka ah ee ka socda goobaha ay ka taliso Alshabab. Mr. Warthon ayaa isagoo hadlaya yiri
“…..wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka iyo hay’adda USAID ee horumarinta caalamku hadda waxa ay ogolaanayaan in ay deeq iyo qandaraasyaba siiyaan hay’adaha ka shaqeeynaya howlaha gargaarka bini’aadanimo ee ka socda Soomaaliya, xittaa haddii lagu daro goobaha ay haatan sida rasmiga ah uga taliso kooxda Al-shabab. Markaa hay’adahaasi ka shaqeeynaya goobahaas, haddii si aan ula-kac ahayn ay howlahooda uga macaashto kooxda Alshabab, waxa ilaalinaya ama difaacaya ruqsadda wasaaradda maaliyadda Maraykanka.”
Mas’uulkani waxa uu sheegay, in ay haya’adahaani ka mid ahaan karaan ama soo hoos-galayaan kuwa sida tooska ah qandaraasyada uga qaata wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ama hay’adda USAID ee horumarinta caalamka, kuwa la sii shaqeeya hay’adahaas Maraykanka ah oo ay ku jiraan kuwa haatan ku howlan samafalka baaxadda leh ee gargaarka lagu caawinayo dadka macaluusha la il-daran.
Marna ma aynaan mamnuucin gaarsiinta gargaarka goobaha hoos yimaada Alshabab.
Mr. Warthon waxa uu carabka ku adkeeyay in xannibaadaha Maraykanka aan sinnaba loola xiriirin karin xaaladda macaluuleed ee taagan, isaga oo arrinkaa ballaarinayana waxa uu yiri:
“Fadlan ii ogollaada in aan caddeeyo arrinkan. Cunaqabataynta aannu ku hayno Alshabab marnaba hadda iyo mar hore ma ayan mamnuucin in gargaar la gaarsiiyo Soomaaliya iyo xittaa goobaha ay ka taliso Alshabab. Laakiin joogitaanka Al-shabab oo ah urur uu Maraykanku u aqoonsanyahay argagixo ayaa ku khasbaya muwaadiniinta Maraykanka in ay raacaan shuruudaha qaanuuniga ah dalka marka ay gargaarka gaarsiinayaan dadka. Laakiin hadda dareenkayaga ugu wayn waa in aan badbaadinnaa nolasha dadka iyo aan hubinno in uu gargaarku gaaro dadka u baahan. Markaa ogolaanshan cusub waxa uu damaanad-qaadayaa dabacsanaantaas ama furfurnaantaas) ay u baahan yihiin geesiyiinta isugu jira ragga iyo dumarka in ay horay ugu socdaansi ay u badbaadiyaan nololasha dadka tabaalaysan”
Xaaladda xeryha qaxootiga iyo ahamiyadda gaarsiinta gargaarka gudaha Soomaaliya.
Dr. Reuben Brigety oo ah ku-xingeenka kaaliyaha xog-hayaha arrimaha dibadda Maraykanka ee arrimaha dadka, qaxootiga iyo socdaalka, ayaa isagu aad uga hadlay xaaladda qaxootiga Soomaaliyeed ee buux-dhaafiyay xeryahaya qaxootiga ee waddamada dariska ah, waxana uu ammaanay dowrka ay waddamada Kenya, Itoobiya iyo Jabuuti ay ka qaadanayeen howlaha gargaaka. Dr. Brigety waxa uu sheegay in ka sokoow dadaalka ay dawladdiisu ka waddo xeryaha ku yaal dibadda, in ay sidoo kale ka go’antahay, in ay gargaar gaarsiiso dadka ku tabaalaysan gudaha. Si kastaba ha ahaatee, mas’uulku waxa uu ka digay in dhibaatadu intaa ka sii darnaan doonto haddii aan la helin farsamo gargaarka lagu gaarsiin karo dadka ku dhibaataysan gudaha Soomaaliya.
Dr. Brigety waxa uu muujiyay in haddii aan helin farsamo samafal dheeraad ah lagu gaarsiin karo gudaha Soomaaliya, ay ka sii dari doonto nafaqadarada sii siyaadaysa iyo heerka dhimashada iyo kororka tirada qaxootiga ku sii qul-qulaya xeryaha qaxootiga ee ka dhisan Kenya iyo Itoobiya.
Gaaridda gudaha Soomaaliya iyo welwelka laga qabo Alshabab.
Inkasta oo ay dawladdu Maraykanku muujisay furfurnaan, Inkasta oo ay beesha caalamku waddo dadaal gargaar oo wax loogu qabanayo ummaddan ay ku habsatay musiibada ugu culus ee maanta dul-saaran caalamka, haddana mas’uuliyiintii shalay u hadashay dawladda Maraykanku waxa ay muujiyeen walwal ku aaddan arrimaha ammaanka iyo gaaritaanka goobaha ay Alshabab ka taliso.
Arintaas waxa cabbiray Jon Brause oo ah ku-xigeenka kaaliyaha xog-hayaha arrimaha dibadda ee xafiiska dimuqraadiyadda, xasaradaha iyo gargaarka bini’aadanimo oo ah qayb ka tirsan Hay’adda USAID ee horumarinta Caalamka.
“…Marka laga hadlayo xaaladda Soomaaliya, waxay xaalad qallafsani ka jirtaa sidii loo gaari lahaa gudaha arrimo ammaan aawadood. Oo xittaa fursadda aan siinay dadka nala shaqeeya in ay si sharci ah uga howl-gali karaan goobahaas dhibaatadu ka jirto, haddana wali waxa na hortaagan mixnadda Alshabab taasoo naga hor-istaagaysa in aan gargaar mance leh gaarsiinno dadka u baahan” Ayuu yiri Mr. Brause.
Mr. Brause waxa uu sheegay in dawladda Maraykanu ay sidoo kale ka shaqeeynayso sidii xal waqtiga fog ah loogu heli lahaa dhibaatooyinka soo noqnoqda ee sababa abaaraha iyo macaluusha iyo sidii loo hubin lahaa in dhibaatooyinka la xiriira cimilada ayan mar walba u sababin khasaare nololeed.
Xiriirka qurba-joogta,iyo caqabadaha gaarsiinta gargaarka.
Radio Daljir oo ka mid ahaa dhinacyadii ka qayb-galay shirkaas ayaa waydiiyay mas’uuliyiinta in ay ka warqabaan dadaalka ay qurba-joogta Soomaaliyeed ugu guntadeen in ay gargaaraan walaalahood dhibaataysan isla markaana ay wax xiriir ah la leeyihiin.
Bruce Wharton oo ah ku-xigeenka kaaliyaha xog-hayaha arrimaha dibadda Maraykanka ee arrimaha Afrika oo su’aashaa ka jawaabay ayaa qiray dadaalka qurba-joogta, waxana uu sheegay in ay xiriir joogto ah la leeyihiin Soomaalida-Maraykanka ah ee ku mashquulsan sidii ay qaybtooda uga qaadan lahaayeen gargaarka bini’aadanimo.
Mr. Warthon waxa kale oo uu jawaabtiisa ku daray jahwareerka qurba-joogta Soomaaliyeed ka haysta halkii ay ku hagaajin lahaayeen qaaraanka ay iska aruuriyeen, isaga oo arrinkaa ka hadlayana waxa uu yiri:
“Waxa jira welwel isa soo taraya oo ah halkii ay qurba-joogta Soomaaliyeed ee Maraykanka ahi ku hagaajin lahayd lacagta ay ururuuriyaan. Waxan u malaynayaa in xilligan tallaabada ugu fiicani ay tahay in ay lacagta ku hayaajiyaan hay’adaha aan dawliga ahayn ee ka shaqeeynaya gudaha Soomaaliya, sida hayadda InterAction oo leh xafiisyo iyo mareegto ay ka heli karaan xiriirkooda, sidaas ayaanunna Soomaalida ku dhiiri-galinaynay”
Mustaqbalka dhow iyo kan fog iyo suuragalnimada fara-galin millatari.
Su’aal kale oo uu Radio Daljir ka waydiiyay waxa u qorshaysan todobaadyada soo socda marka laga hadlayo gaarsiinta gargaarka gudaha Soomaaliya, gaar ahaan goobaha ay kataliso kooxda Al-shabab, ayuu Jon Brause waxa uu sheegay in ay la shaqeeynayaan hay’adaha gargaarka ee uu xiriirka ka dhexeeyo, isla markaana ay ka dabcinayaan caqabadihii jiri jiray. Balse waxa uu dhinaca kale muujiyay caqabadaha ammaan ee hay’adaha gargaarka kaga iman kara Al-shabab, waxana uu carabka ku adkeeyay in dadaalkasta oo lala yimaado uunan mira-dhal noqon karin haddii aan arrimahaas xal loo helin.
Daljir waxa ay markale waydiisay waxa ay arrintaas ammaanka ka yeelayaan iyo in uu Maraykanku ku fakarayo in uu millatari ahaan u soo galo Soomaaliya haddii ay arrintaasi lagama maarmaan u noqoto qaybinta gargaarka. Mr. Warthon oo arrinkaa meesha ka saarayana waxa uu yiri:
“Eeg, Soomaaliya waxaa haatan jooga ciidamo caalami ah isla markaana ku carbisan shaqadooda, kuwaas oo sida aan qabo ka shaqeeynaya sidii ay u abuuri lahaayeen jawi ay hay’adaha gargaarku u gaari lahaayeen dadka dhibaataysan, gaar ahaan kuwa ku aruursan xeryaha barakacayaasha ee ku yaal agagaarka Muqdisho, isla markaana waxannu mustaqbalka fog qorsheeynaynaa in aan la shaqayno dawladda federaalka KMG ah ee Soomaalya sida uu qabo heshiiskii Jabuutina aan hubino in ammaan iyo xasillooni lagu fidiyo dhammaan Soomaaliya” ayuu ku soo gabagabeeyay Brause hadalkiisa.”
Tallaabadan uu Maryakanku qaatay ayaa lagu wadaa in ay hay’ado gargaar oo badan, iyo waliba Soomaali Maraykan ahba ku dhiiri-galiso in ay ka shaqo-galaan koonfurta Soomaaliya oo inta badan ay ka taliso kooxda Al-shabab, kuwaas oo waayadii hore ka cabsi qabay in lagu tuhmi karo xiriir ay la leeyihiin Alshabab taasna ay ku mutaysan karaan dacwad liddi ku ah iyo in ayan qaybtooda ka helin dhaqaalaha caalamka gableedku ugu talagalay arrimaha gargaarka iyo horumarinta.
Diiwaanka Wararka Daljir,